Ny orinasa Swatch dia manameloka an'i Samsung amin'ny fakana tahaka ny tontolon'ny sasany amin'ireo famantaranandro marika fampiasa | Androidsis
Hatramin'ny nahatongavan'ny smartwatches voalohany teny an-tsena, ny vondrona mpiambina Swatch dia nanambara hatrany fa lamaody mandalo izy io, zavatra iray izay ahitanay azy fa tsy mety. Miharihary fa hisy foana ireo mpampiasa izay tia famantaranandro nentim-paharazana amin'ny androm-piainany, fa ny fironana amin'ny tsena dia mandeha amin'ny làlana hafa.
Na dia tsy mamela ny hanampiana ny antso an-tariby fahatelo amin'ny Apple Watch aza i Apple, na ny Google na ny Samsung dia mamela izany amin'ny alàlan'ny fivarotana fangatahana. Amin'io lafiny io dia nahazo fitarainana avy amin'i Swatch ho an'ny multinational koreanina kopia ny volavolan'ny sasany amin'ireo maodely malaza sy malaza indrindra.
Ny mpanao famantaranandro avy any Suisse dia nanambara fa ny antso an-tariby amin'ireo famantaranandro marani-tsaina misy ao amin'ny magazay Samsung dia "mitondra fanamarihana mitovy na mitovy amin'ny azy" ho an'ireo izay ampiasain'i Swatch amin'ny sasany amin'ireo marika malaza indrindra toa ny Longines, Omega na Tissot.
Ao amin'ny fitoriana napetraky ny vondrona mpanao famantaranandro dia milaza fa:
Tanjona mararin'ny Trademark ity dia tsy misy afa-tsy tanjona tokana: ny fanefana ny lazany, ny lazany ary ny hatsaram-panahin'ny vokatra sy ny marika Swatch Group Company, namboarina tamim-pitandremana nandritra ny am-polony taona maro.
Swatch dia mangataka onitra ara-bola mitentina 100 tapitrisa dolara amin'ny onitra, noho ny fiheverany fa fifaninanana tsy ara-dalàna ankoatra ny fomba fanao tsy ara-drariny. Nametraka ny fitoriana tany Etazonia ny vondrona mpiambina satria any izy io izay nanoratan'i Samsung ny marika amantarana azy ho an'ny maodely Gear Sport, Gear, Gear S3 Classic ary Gear Frontier.
Swatch dia manan-jo hangataka ny onitra takiny fa ny lojika kosa dia ny vola tsy maintsy aloan'ny orinasa koreana raha hita fa meloka izy Hiorina amin'ny isan'ireo fitaovana namidinao ireo maodely afaka mametraka ireo sehatra ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ny orinasa Swatch dia manameloka an'i Samsung amin'ny fakana tahaka ny tontolon'ny sasany amin'ireo fiambenana famantaranandro azy
TCL dia manolotra prototype finday avo lenta Alcatel ao amin'ny MWC19
Ny Samsung Galaxy A10 2019, finday vaovao mora vidy an'ny Samsung, dia mipoitra eo amin'ny sehatra alohan'ny fampisehoana azy